इन्धनको मूल्य दश दिनमै बढ्यो, नयाँ मूल्य कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
इन्धनको मूल्य दश दिनमै बढ्यो, नयाँ मूल्य कति ?
काठमाडौं, असोज २ । सरकारले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको तुलनामा भारतीय मूल्य कमजोर भएपछि नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्यमा बृद्धि भएको नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशन शुशील भट्टराईले बताए ।
आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजित मूल्य अनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा बृद्धि भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस तिहारसम्म इन्धनको मूल्य नबढ्ने, निगमको घाटा चुलियो !
निगमले १० दिन अघि २० भदौमा मात्रै इन्धनको मूल्यमा भारी बृद्धि गरेको थियो । आइतबार भारतीय आयल कर्पोरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्य अनुसार १ अर्ब ३ करोड मूल्य घाटा हुने भएकाले इन्धनको मुल्य बृद्धि भएको भट्टराईले बताए ।
याे पनि पढ्नुस इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ घट्यो
पुरानो मूल्य अनुसार आयल निगमलार्इ पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४४ पैसा र डिजेलमा ५ रुपैयाँ १२ पैसा नोक्सान हुने उनको भनाइ छ । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा समान ३र३ रुपैयाँ बढाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कुनमा कति रुपैयाँ वृद्धि ?
ट्याग्स: Indhan, Indhan mulye badhyo